ANDRAMASINA Nidoboka am-ponja ilay reny nanary zanaka tany anaty WC
Naiditra any am-ponja ny talata teo ilay renim-pianakaviana nanary ny zanany, tany anaty lavam-piringa tany Andramasina, Fokontany Ambohimarina, ny voalohan’ny taona teo.
Io ny vokatry ny fampiakarana fampanoavana tany Ambatolampy taorian’ny famotoran’ny mpitandro filaminana araka ny resaka manokana nifanoavana tamin’ny lehiben’ny tobimparitry ny zandariamariam-pirenana ao Andramasina. Ilay zaza kosa dia napetraka any amin’ivon-toeram-pitaizana zaza kamboty na “centre social”. Voalazan’ny manodidina sy ny manam-pahefana any an-toerana ary nohamafisin’ny zandary fa salama saina tsara ity renim-pianakaviana nahavanon-doza ity. Niteraka tsy nanambady moa izy ka heverin’ny mponina fa ny fahasahiranany ara-pivelomana no nahatonga azy nanaotao foana toy izao. Vesatra ho azy tamin’ny fiarahamonina ihany koa ny fahafaham-baraka raha ny fintantarany tamin’ireo akaiky azy, araka ny fiheveran’ny tany amamonina azy fa bevohoka tsy manambady. Any amin’ny fonjan’Ambatolampy moa ity renim-pianakaviana ity no miandry ny fitsarana azy, izay vao maika nidiram-pahasahiranana tanteraka.
Etsy andaniny, vahaolana azony natao ny nitady mpitaiza ho an’ilay zaza tsy manantsiny. Ao mantsy ireo tsy mety mahazo zaza no maniry fatratra saingy tsy afa-manoatra ka tapakevitra fa hanangan-janaka. Manoloana ireo mpanangan-jaza ihany koa mila arahina maso aorian’ny didim-pitsarana fa tsy kely lalana ny ratsy amin’izao trafika ana olona izao.